Wararka - e -LinkCare ayaa ka qayb galay shirweynaha caalamiga ah ee ERS 2018 ee Paris
e-LinkCare waxay ka qaybgashay shirweynaha caalamiga ah ee ERS 2018 ee Paris
2018 Shirweynaha Caalamiga ah ee Neefsashada Yurub waxaa la qabtay 15 -kii ilaa 19 -kii Sebtember 2018, Paris, France oo ah bandhigga ugu saameynta badan ee warshadaha neefsashada; wuxuu ahaa goob ay ku kulmaan martida iyo ka -qaybgalayaashu dhammaan daafaha dunida sida sannad walba. e-LinkCare waxay la timid booqdeyaal badan oo cusub iyo sidoo kale macaamiishii caalamka ee jiray intii lagu jiray bandhigga 4-maalmood ah. Sannadkan ERS, taxane alaab neefsasho ah oo ay soo saareen oo ay soo saareen e-LinkCare Meditech Co., Ltd oo ay ku jiraan laba nooc oo ah Nidaamyada Spirometer iyo Nebulizer-ka Wearable Mesh Nebulizer ayaa la soo bandhigay.
ERS waxay ahayd bandhig aad loogu guulaystay marka la eego horumarinta mashaariicda cusub iyo bilowga iskaashiga cusub. Waan ku faraxsanahay inaan martigalino martida adduunka oo dhan ee nagu soo booqday G25. Waad ku mahadsan tahay booqashadaada iyo xiisaha astaantayada.
5.2 Sonkorta Dhiigga, Qalabka Baaritaanka Sonkorta Dhiigga ee Bilaashka ah, Pneumotachograph Spirometer, Mashiinka Hubinta Sonkorta Shirkadda ugu Fiican, Mashiinka Baaritaanka Sonkorta Dhiigga, Soonka Sonkorta Dhiigga 100,